जिउँ’दैमा श्रद्धा’ञ्जलीको ओइरो लागेपछि कलाकार ‘दारी बा’ आक्रो’शित , को को वि’रुद्ध उजु’री ?(भिडियो हे’र्नुहोस) – Sadhaiko Khabar
जिउँ’दैमा श्रद्धा’ञ्जलीको ओइरो लागेपछि कलाकार ‘दारी बा’ आक्रो’शित , को को वि’रुद्ध उजु’री ?(भिडियो हे’र्नुहोस)
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ ०७, २०७८ समय: २२:३८:५९
काठमाडौ / मंगलवार मेरी वास्सै कार्यक्रम अनएयर भयो । जसमा श्रद्धा’ञ्जली दिएको दृष्य थियो । त्यो घट’नालाई लिएर उनको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा वास्तवमै उनको नि’धन भएको भन्दै श्रद्धा’ञ्जली दिन थालेपछि सुरविर पण्डित (दारी बा) लाई निकै नै सम’स्या भयो ।
लगातार एक पछि अर्को मिडियामा आफ्नो नि’धन भएको समाचार आएपछि उनी निकै चि’न्तित भए । उनलाई देश विदेशवाट फोन आउन थाले । म जि’वितै छु भनेर आफैले फोनवाट भन्नुपर्दा उनलाई निकै सम’स्या भयो । बुधवार सुरुमा मिडियामा त्यो समाचार देख्दा उनलाई खासै केही लागेको थिएन ।
टेलिचलचित्रमा भएको ना’टकिय घट’नालाई लिएर वास्तविक जस्तै गरी समाचार बनाउँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले चि’न्ता ब्य’क्त गर्न थालेपछि उनलाई पनि वास्तवमै नराम्रो लागेको थियो । केही दिन अघि एउटा गीतको छायाँकनमा अर्की एक कलाकारले निभाएको भुमिकालाई लिएर पनि त्यस्तै अफ’वाह सामाजिक सञ्जालमा फैलि’एको थियो ।
उनले यति धेरै सम’स्या भो’गिन् की का’नुनी उप’चारका लागि प्र’हरी कहाँ पुगीन् । कलाकारहरुलाई फिल्ममा र कलाकारीतामा निभा’एको भुमिका लाई लिएर वास्तवमै श्रद्धा’ञ्जली दिँदा उनीहरुले कति सम’स्या भो’ग्नुपर्छ भन्ने कुरा यी कलाकारले खुलाएका छन् । कलाकार रश्मी भट्ट रहिनन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धा’ञ्जली भनेर आउँदा उनलाई भने निकै झ’ट्का लागेको बताइन् । हे’र्नुहोस् भिडियो :-